Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? | Ogaalnews
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ?
July 25, 2010 | Published by: admin TweetCudurka maskax garaadka ama qoorgooyaha waa caabuq ku dhaca saddexda lakab ee xuubabka daboola maskaxda iyo xangulaha ee loo yaqaano (Meninge), sidaa daraadeed waa cudur ku lug leh inuu waxyeelo gaadhsiiyo maskaxda, xangulaha, iyo dhamaan habdhiska dareen-wadka dhexe.
Qoorgooyaha ama maskaxgaraadka waxa uu noqon karaa mid soo bood ah (acute) ama muddo soo jiitamayay (Chronic). Cudurkani waa cudur u badan qaarada Afrika oo ku faafa meelaha dadka ku badan yihiin si saf mar ah (Epidemic) sida xerooyinka ciidamada, xabsiyada, iyo goobaha waxbarashada. Cudurkani waxa uu isku beddeli karaa cuduro kale oo aad khatar u ah; dhammaan cuduradaasina waxay sababi karaan in dheecaanka xangulaha iyo maskaxda soo daayaan waxa loo yaqaan (cerebrospinal fluid) oo ay ku xanibaan maskaxda gudaheeda iyagoo tuubooyinkii qaadi lahaana daboola. Arrintan oo ka dhalata maskaxda oo biyowda (Hydrocephalus) iyo neerfayaasha maskaxda oo waxyeelooba. Waxyeeladan waxaa ka dhalan kara dhego la’aan (deafness), indho la’aan (blindness) iyo naafoofid kale.
Meningitis-ka waa cudur dilaa ah haddii aan si deg deg ah loo daweyn, markii la daweeyo kadib xawaaraha waxyeelladiisu waa 5%, qofkii ka kacana waxa uu ku reebaa waxyeelo abid ah, hadii aan la daweyn xawaaraha waxyeelladiisu waa 30% iyo wixii ka badan.
Waxa sababa iyo sida uu ku faafo
Noole badan oo kala duwan ayaa sababi kara cudurkan. Midka soo-boodka ah waxaa laga yaabaa inuu sababo Virus ama Bacteria. Maskaxgaraadka viruska-ka sababa waxaa loo yaqaanaa (aseptic ama viral meningitis), midka bacteria-da sababto waxaa loo yaqaanaa (purulent ama bacterial meningitis).
Viral meningitis-ka waxaa laga yaabaa inuu iska tago ama uu isku beddelo Bubus (chicken box), Jadeeco (measles) qaamo qashiir (mumps) ama dabaysha (polio).
Bacterial meningitis-ka waxaa laga yabaa inay sababaan dhowr noole oo bacteria ah sida Pneumococi, hemaphilus influence, meningococcal, iyo kuwa kale oo badan.
Calaamadaha ugu horeeyo ee meningitis-ka waxaa kamid ah
1- Madax xannuun (headache)
2- Qandho (fever)
3- Hammuun la’aan (loss of appetite)
4- Gariir (rigors)
5- Xannuun dhinaca adimada ama dhabarka
6- Lulmo (grossness)
7- Isku daran (confused)
Calaamadaha waqtiga danbe waxaa ka mid ah
1- Surka oo dib u laabmo oo aan horey u soo loodsamayn ( neck stiffness)
2- Kern signs, waa calaamado marka qofka dhabarka loo jiifiyo aanu lugahiisa si toos ah sare u qaadi Karin waxaana sababa waxyeelada uu cudurkani gaadhsiiyay xangulaha
Sida loo daaweeyo
Waxa qofka la siiyaa inta badan Irbadaha Penishiliinta, xididka ama muruqa afartii saacba mar kuna wad ilaa inta ay xumaddu caadi kusoo noqnayso, haddii xumaddu jabto ka dib ugu beddel kaniinka Chloromhenicol lixdii saacba mar muddo 14 maalmood, sidoo kale waxaa lagu mudaa Irbad Phenobarbital qiyaas dhan 5mg sideeddii saacba mar, waxaad kaloo siin kartaa cabitaan fara badan haddii aanu afka wax ka qaadan Karin faleebooyin ayaa laga siin karaa xididka.